တရုပ်နှစ်သစ်ကူး ၂၀၁၄ လက်ရွေးစင် ပုံရိပ်များ – Lunar New Year 2014 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » တရုပ်နှစ်သစ်ကူး ၂၀၁၄ လက်ရွေးစင် ပုံရိပ်များ – Lunar New Year 2014
တရုပ်နှစ်သစ်ကူး ၂၀၁၄ လက်ရွေးစင် ပုံရိပ်များ – Lunar New Year 2014
Posted by Kyaemon on Feb 10, 2014 in Cultures, Education, Environment, History, Photography, Society & Lifestyle, Style & Beauty, Travel |9comments
Chinese New Year 2014 Lunar New Year 2014
တရုပ်နှစ်သစ်ကူး ချိန်ခါသမယမှာမြန်မာဇာတိနွယ် တရုပ်အမျိုးသားနဲ့
ဂေဇက်ရွာသူရွာသား အပေါင်းတို့အား မင်္ဂလာပါ၊
ကမ်ဘာ အရပ်ရပ် က ပုံအလှတွေကို လိုက်လေ့လာခံစားရင်း
ဒေသန္ဒရ ဗဟုသုတတွေလဲ တိုးနိုင်မှာပါ၊
အရပ်လေးပါး ကိုရောက်ကြတဲ့ တရုပ်အနွယ်ဘွားနဲ့၎င်းတို့ရဲ့
နေရာအနှံ့အပြား က လူပေါင်းစုံတို့လဲ
တရုပ်နှစ်သစ်ကူးကို တပျော်တပါး ပါဝင် ဆင်နွဲလာကြတယ်၊
Christmas ခရစ်စမတ် မှာ
ဥပမာ။ မလေးရှား၊အင်ဒိုနီရှား၊ယိုးဒယား၊ဖီလီပိုင်၊မော်ရစ်သျှ Mauritius၊ တို့မှာ ဆိုရင်
Link လင့်ခ ကိုဝင်ကြည့်နိုင်
Chinese New Year – Wikipedia, the free encyclopedia
အများသိကြတဲ့တရုပ်နှစ်သစ်ကူးက “လ” ပြက္ခဒိန်နဲ့သွားလို့
Lunar New Year လို့လဲခေါ်တာပါ၊
ယင်း ပြက္ခဒိန် စံနစ် ကို ဗီယက်နမ်၊ကိုရီးယား၊မွန်ကိုလီယာ၊
တရုပ်အမျိုးသားခေါင်းဆောင် Sun Yat Sen ဆွန်ယက်ဆင် လက်ထက်တုန်းက
အနောက်နိုင်ငံပြက္ခဒိန်စံနစ်အတိုင်း နှစ်သစ်ကူးနေ့ကို ပြောင်းလဲဘို့
လုပ်တာ ခဏဘဲရပြီး နောက်ပိုင်းမှာမူလ အတိုင်းပြန်ဖြစ်ခဲ့တာပါဘဲ၊
ဂျပန်က အနောက်နိုင်ငံပြက္ခဒိန်ကို တရာဝင် ပြောင်းကျင့်သုံးလာသော်လည်း၊
ဂျပန်ဒေသ မနဲ မှာက မူလ Lunar New Year စံနစ်အတိုင်း နှစ်သစ်ကူး နေ့
Lion dance sparks Chinese new year celebration in Yangon
“မြင်း” နှစ် သို့အပြောင်း၊ Jan 31 ရက်နေ့ တရုပ်နှစ်သစ်ကူးနေ့မှာ၊
ရန်ကုန်က နဂါး အ “က” နဲ့ ခြင်္သေ့ အ “က” အဖွဲ့ ၁၂ ဖွဲ့ ကျော်တို့က
တရုပ်တန်းမှာ စီတန်း “က” ပြ ဖြေဖျော်ကြတယ်၊
A grand lion and dragon dance procession by overadozen groups of Myanmar-Chinese sparked the Chinese new year celebration in Myanmar’s former capital of Yangon Thursday afternoon, the eve of the Year of Horse which falls on Jan. 31 this year.
Beating large traditional drums and flying colorful festive flags, the amateur lion and dragon dancing groups organized the round-the-Chinatown procession, attracting thousands of by-passers.
ဘုံကျောင်းတွေကို အရင်သွားပြီး”က” ပြ ကန်တော့ကြတယ်
As in previous years, the marchers first called on two Guanyin (God of Mercy) temples in Chinatown with brief performances and then went on.
The two ancient temples of overacentury represent the two largest Chinese temples in the Yangon Chinatown.
The procession began in the heart of Chinatown as traffic, which had been blocked for days for new year purchase, returned to normal, paving the way for the procession to take place.
ရာချီနှစ်က ရှေးရိုးထုံးစံ အစဉ်အလာ အတိုင်း လူတွေကဘယ်နေရာဘဲရောက်နေပစေ၊
အဲဒီနေ့မှာဆိုရင် မိမိတို့ရဲ့ ဌာနေကိုပြန်ပြီး မိမိတို့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ ပြန်လည်စုစည်းဆုံတွေ့ကြတယ်၊
Asacenturies-old tradition, people come back from wherever they are for family reunion on the Lunar New Year eve.
Myanmar-Chinese families used to follow the tradition inherited from their ancestors who drifted away from homeland in war time dating back to the Qing Dynasty (1644-1911) when the first generation of Chinese citizens migrated to various parts of the world including Myanmar’s Yangon by waterways.
Some family members are prepared to spend the night of the new year eve by staying up late or all night at home or at temples to greet the new Year of Horse from the Year of Snake.
ခြင်္သေ့အ “က” ပြိုင်ပွဲတွေကို ၃ ရက်တိုင်တိုင်လုပ်ပြီး ဆုပေးကြတယ်
A series of lion dance competitions are to take place in the heart of Chinatown starting the second day of the Lunar New Year and the contests will run for at least three days andaprize presentation ceremony will be held at the end.
ဆင်းရဲနွမ်းပါး မှီခိုရာမဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို
For the past week, the Myanmar-Chinese community launched their traditional charity activities with several social and religious organizations, distributing cash aid to poor childless people above 75 years of age.
ဒေသခံ အဖွဲ့အစည်းတွေကလဲ ယဉ်ကျေးမှု ကပွဲ ဖြေဖျော်ပွဲတွေကို
Other local Chinese cultural associations are also to launch their biggest cultural shows of the year beginning the first day of the new year.
Los Angeles က သတင်းစာ Link လင့်ခ ကိုဝင်ကြည့်နိုင်
The world welcomes the Lunar New Year of the Horse.
Chinese New Year – latimes.com
Los Angeles တရုပ်တန်းက Thien Hau ဘုံကျောင်း မှာလူထောင်ချီပြီးလာကန်တော့ကြတယ်၊
ခြင်္သေ့ အ “က” ကိုလဲကြည့်သွားတယ်
ဘေဂျင်းအရပ်သားတဦးက ဘုံကျောင်းကိုလာရှိခိုးပြီး ဆုတောင်းနေပုံ
မန်ချူ ဧကရစ်တွေက နှစ်သစ်ကူးပွဲမှာ ကောင်းကင်ဘုရားကို ရှိခိုးကြတဲ့
အခမ်းအနား အစဉ်အလာ အတိုင်း ဘေဂျင်းမှာ ဆက်လက်ပြီးသားနားစွာကျင်းပ၊
ဖီလစ်ပိုင် မနီလာမြို့က ပူဇော်ပွဲ
ဖီလစ်ပိုင် မနီလာမြို့က နဂါး အ”က”
ဂျပန် ယိုကိုဟာမားမြို့ကခြင်္သေ့တကောင် ဆိုင်ရှင်ကို
ကနေဒါ Richmond ကဘုံကျောင်းမှာရှိခိုး ပူဇော်
အင်ဒိုနီရှား ကူဒူးKudus မြို့ကဘုံကျောင်းမှာရေကြီးသော်လည်း ဘုရားရှိခိုး ပူဇော်
အင်ဒိုနီရှား Tangerang မြို့ကBun San Bio ဘုံကျောင်းမှာလဲ ဘုရားရှိခိုး ဆီမီး ပူဇော်
စင်ကာပူက ရေငါးသတ္တဝါ အလှပြ ရေလှောင်ကန်ကြီးမှာ နဂါး အ”က”ကို
တမူထူးခြား အဆန်း ကျင်းပ ပြ
မလေးရှား ကွာလာလွန်ပူးမြို့က ဘုံကျောင်းမှာ မီးအိမ်တွေ နဲ့မီးပူဇော်ပွဲအလှ
ရှန်ဟဲ မြို့ ယုယွမ်ပန်းခြံ မှာ” မြင်း” နှစ် ကိုရည်စူးပြီး၊
မြင်းရုပ်ပုံနဲ့ မီးအိမ်ကြီးကို အလှမီးထွန်းပြ၊
နှစ်သစ်ကူးကာလမှာ မီးရထား ခရီးစဉ် အခေါက်ရေ သန်းပေါင်း ၃၆၂၀ (၃၆၂ ကုဋေ)
ကလေးက သေတ္တာကိုဘက်ရင်း လိုက်ပါသွား
Australia စစ်ဒနီမြို့ က Opera”က” ဇာတ်ရုံ ဘေးက တံတားကြီး ပေါ်မှာ
နဂါး စီတန်းထားတာကိုနောက်ခံပါ ပါအောင် ဓာတ်ပုံရိုက်
ဘေဂျင်းTemple of Earth ဘုံကျောင်းပန်းခြံဝင်းကသစ်ပင်များကိုမီးအိမ်တွေနဲ့ တွဲချိတ် အလှဆင်
ဖီလစ်ပိုင် Binondo တရုပ်တန်း မှာနဂါး အ “က” ပြတာကို လိုက်ကြည့်ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီး
အင်ဒိုနီရှား ဂျာကတာ မြို့က Petak Sambiian ဘုံကျောင်း မှာ စေတနာရှင်တဦးက
ကမ်ဘောဒီယား ဖနွန်ဖနန်မြို့ ကတရုပ်အနွယ်ဘွားတို့ကခြင်္သေ့ အ”က”
တောင်ကိုရီးယားကနယ်ခြားPanmunjorn အရပ်ကနေ မိမိတို့ရဲ့မိဘ အဖိုးအဖွားကို
မလေးရှား ကွာလာလွမ်ပူးမှ ဘုံကျောင်းတကျောင်းရဲ့
စင်ကာပူ Marina Bay ကမ်းခြေ က မီးထွန်းပွဲ နဲ့မီးရှူးမီးပန်း အလှ
စင်ကာပူကMarina Bay ကမ်းခြေမှာ
ဘေဂျင်း Happy Valley Amusement Park အရပ်က
နဂါး အ”က” ရဲ့နောက်ခံ မီးရှူးမီးပန်းတွေဟာ
Happy Chinese New Year 2014 – In Focus – The Atlantic
Today marks the start of the Chinese Lunar Year, the Year of the Horse. One of the 12 animals of the Chinese zodiac, the horse signifies kindness, strength, and gregariousness. In the larger Chinese astrological cycle, this year is also associated with the element of wood, which makes 2014 the Year of the Wooden Horse. The combination is supposed to signify 12 months of patience and cooperation ahead. People around the world ushered in the new year with firework displays, family get-togethers, temple visits, and street festivals. Collected here are images from several countries where revelers have been welcoming the Wooden Horse’s arrival. [34 photos]
၂၀၁၄ က သဝဏ်လွှာ
President Obama Extends Best Wishes for the Lunar New Year | Asian American Press
WASHINGTON, D.C. (Jan. 31, 2014) — Today, the White House releasedavideo message from President Obama welcoming in the Lunar New Year.
ကျနော်နဲ့ကျနော့ဇနီး Michelle က သန်းပေါင်းများစွာသော အာရှတိုက်သား အားလုံးနဲ့အတူ
Lunar New Year နှစ်သစ်ကူးကိုကြိုဆိုပါကြောင်း၊
ယဉ်ကျေးမှုမျိုးစုံ ထုံးတမ်းစဉ်လာမျိုးစုံ ပေါကြွယ်တဲ့အနစ်တို့မှ
ဤနိုင်ငံက အားယူကြီးပွါး လာတာကို
ခုလို နှစ်သစ်ကူး အခါ မျိုးမှာ
ကျွန်ုပ်တို့ သတိရယူ ရပါကြောင်း၊
၂၀၁၃ က သဝဏ်လွှာ
Best Wishes for the Lunar New Year from President Obama | The White House
In advance of the upcoming holiday, President Obama recordedamessage sending his best wishes to all those celebrating the Lunar New Year, both in the United States and around the world:
ကျနော်နဲ့ကျနော့ဇနီး Michelle က Lunar New Year
(အာရှအမေရိကန်နဲ့ Pacific ကျွန်းသူကျွန်းသားတို့အပါအဝင်)
ကို နှုတ်ခွန်းဆက် မင်္ဂလာပြုပါကြောင်း
Michelle and I want to send our best wishes to everyone celebrating the Lunar New Year, including Asian Americans and Pacific Islanders.
ကျနော် အင်ဒိုနီရှားမှာကြီးလာလို့ငယ်စဉ်က Lunar New Year နှစ်သစ်ကူးချိန်ကအားရစရာ
မီးရှူးမီးပန်း ဗြောက်အိုး လွှတ်တာတွေ၊
သူငယ်ချင်းနဲ့မိသားစုဝင် စုဝေးပွဲတွေ နဲ့ပေါ့၊
Growing up in Hawaii, I remember all the excitement surrounding the Lunar New Year – from the parades and the fireworks to the smaller gatherings with family and friends. It has always beenatime for celebration and hope. And this year, as Americans here at home and around the world welcome the Year of the Dragon, it’s important to remember that our country is stronger because of our diversity. We are richer because of the different cultures that make up this country.
So to all those celebrating the Lunar New Year, I wish you and your loved ones peace, prosperity, and good health.
ဒီ နှစ်မှာ မွေးတဲ့သူတွေက ကုတ်ကမြင်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်
မဖြစ်ရင် ဇောင်းက လွှတ်လိုက်တဲ့ မြင်းလိုဖြစ်၊
ချိုင်းနားတောင်းမှာ မြင်းရုပ်လေးတွေ လှမှလှ။
မြင်းနှစ်မှာ WOW အိမ်ထောင်ကျမယ်တဲ့
အဲဒီ ပါးစပ်ဆိုင်းနဲ့ ..တို့ဘောဇိတို့ ကို ပတ်ပြီး..ကကြတာ… ..
အံပေါင်း တစ်သိန်းခွဲ ရတယ်..ပျော်လိုက်တာ…
နှစ်ကူးမှာ အချစ်တွေနဲ့ မြူးမယ်တဲ့ဗျာ ..
ဟိုနေ့ကတော့ ဘိုကလေးဈေးလမ်းမှာ နဂါးလာကသွားတာ။ တိုင်တွေဆင်တာနဲ့သိမ်းတာကပိုကြာတယ်။ ကတာကခဏလေးရယ်။ လမ်းကိုအကုန်ပိတ်ပလိုက်တယ် အေးရော။
Wow! Great ! ဟီဟီ (မြင်းရီသံ မီဟုတ်)
WOW ကိုထောက်ခံတဲ့သူ ( မြတ်ပုလဲဖြူ ) လဲအိမ်ထောင်ကျနိုင်ပါတယ်…
ညည်းက ဗေဒင်ချရာလား … ဘယ်တော့ကျမှာရဲ … ဘဒူနဲ့ ရဲ .. ဘမှာရဲ ..အတိအကျကြောအေ ..
(သီချင်းလေး ညည်းရင်း နဲ့)